Sony Xperia XZ Ongororo Yekutanga: Mukudzika - WebSetNet
Smart bhatiri tekinoroji
Sony Xperia XZ Premium ongororo: Iyo Xperia XZ Premium Inoenderera mberi dzinza rakatangwa na 2015 Z5 Yekutanga uye nezita rakadai, isu hatitarisiri chero zvakaderera pane Sony's 'Mutambo'.
Sony Xperia XZ Premium ongororo: Dhizaini
Muviri unoita kunge muchinjikwa pakati pePrimiyamu yapfuura uye gore rapfuura XZ mureza une fomu yakatenderedzwa inogara zvakanaka muruoko uye yakavharwa nesimbi yakanyoroveswa iyo inotaridzika chaizvo kupokana nechiedza. Iyo XZ Premium ndeimwe yenhamba iri kuwedzera yemafoni akabatwa mune iri kukura tsika yegirazi-yekupedzisa colourways uye iyo Luminous Chrome sarudzo inofanirwa kudzivirirwa kana iwe usiri kuda kugara wakatarisana nesmudges, zvigunwe zveminwe kana scuffs. Panzvimbo pezvo sarudza iyo Deepsea Nhema sarudzo, iyo inotora pane classier, yakavanzika girini hue uye zvirinani kuviga zvikwambo (kune zvakare Bronze Pink sarudzo, kana ichi chiri chinhu chako).
Kunyangwe iri mhedziso yemuchindwe-yekuzadza (yakareba uye yakafara kupfuura yakasarudzika chunky Pixel XL), mativi akakombama, chiuno chakamanikana uye akafunga mabhatani anoiswa zvinoita kuti ingove kugadzikana kushandisa mune imwechete mitt, kunyangwe kana kutenderera uchitenderera kucharamba kuchiratidza. kuyedza vanhu vane maoko mashoma.
Bhatani-rakagadzwa bhatani remagetsi rakapetwa kaviri sechinhu chinoshamisa cheminwe yekunzwa, pane Gorilla Girazi 5 inodzivirira kumberi, microSD uye nanoSIM slot inogara pasi pechiteshi chakavharika kuruboshwe, nepo foni ichiitawo yakajairwa 3.5mm headphone jack uye yakafumura USB-C doko nguva yese iyi ichizvikudza IP68 guruva uye kushora kwemvura, ichifananidza neyeyeyemakwikwi anokwikwidza iyo Galaxy S8.
Sony Xperia XZ Premium ongororo: Screen uye midhiya
Zvakanaka kuona kuti Sony yakadonhedza pasi zvese zvehunyanzvi uye zvevaraidzo kuziva-maitiro kuitira kuti iwedzere iyo XZ Premium's multimedia chops.
Iyo 5.5-inch 16: 9 IPS Triluminos inoratidzira mapake mune anopenga 807ppi semhedzisiro yesarudzo yayo ye4K uye nekuwedzera muHDR10 rutsigiro, iri zvakare nyika yekutanga. Ehezve, skrini yakadaro inongova yakanakisa sezviri mukati mayo (chinetso chakafanana neicho chakatarisana neyekutanga Z5 Premium) uye izvozvi kunhonga hakushamisi zvinoshamisa.
Iko mufaro kutarisisa mukushandiswa kwemazuva ese, neiyo Sony pachayo X-Reality Injini uye mashoma ekuratidzira maturusi ekupa kupa kuti utaridze kutaridzika kweyakajairika zvemukati asi izvozvi kugona kwayo chaiko kunogona kungo tariswa chete uchishandisa yakatsaurwa sampuro vhidhiyo. Rutsigiro rwekushambadzira zvirimo zvinoenderana kubva kune anofarira eAmazon neNetflix achiri kuzoitika (iyo yekupedzisira ichangobva kuwedzera rutsigiro rweDolby Vision pane LG G6 asi kwete HDR10) uye hapana zuva rakajeka rekuti riwanikwe riini.
Kana zviri zvekuteerera, iwo maviri-anotarisana-anotarisana masipika anopa akasimba akazara vhoriyamu uye usakurumidza kumonyorora ruzha, izvo zvakawandisa sezvatinogona kutarisira. Dhizaisa mukati mezviruva uye iwe zvakare unogona kupokana neyakaganhurirwa muyananisi, upscale standard-resolution mimhanzi mimhanzi kusvika padyo neHi-Res odhiyo standard uye kune kunyange rutsigiro ruzha-rwekudzima mahedhifoni.
Sony Xperia XZ Premium ongororo: OS
Yekutanga yeiyo Android 7.1 mushandisi ruzivo inotora zvimwe zvinofungidzirwa shanduko kubva kwaSony, senge rakakura danho rekuzvigadzirira neako epamba matweji uye madiki anotakurika pakupihwa. Kune zvakare kwakabatanidzwa zviitiko zvekutevera kuburikidza neLifelog app uye split-screen multitasking inova chikamu chekuzvarwa cheNougat chinoshanda zvakanyanya mushe pafoni yakawedzera uye yakasviba skrini.
Ipo paine zvimwe zvakapetwa maererano nezvipo zvaSony zvakagara padhuze neGoogle, vamwe vanogona kuwana huwandu hwakawedzerwa mukufarira kweSideView app yemafirimu neTV zvinyorwa, pamwe neNews Suite.
Iyo XZ Premium inozvirumbidzawo PS4 Remote Play kuenderana uye preloaded PlayStation app zvakare inokubatanidza iwe kuenda kune yakafara PlayStation nharaunda - hunhu hwakasarudzika kune Sony mafoni kunze-kwe-bhokisi.
Isuwo tinofanirwa kurumbidza Sony nekuda kwayo yakanakisa Mubatsiri app, iyo inobatsira vashandisi vatsva kuziva nzira yekushandisa simba reimba yavo nyowani yemagetsi magetsi vachiisa zvakareruka-kushandisa-bhatiri uye zvishandiso manejimendi maturusi pamunwe dzevashandisi, zvese munzvimbo imwechete. .
Verenga zvinotevera: Sony Xperia XZ Premium mazano, tricks uye zvakavanzwa
Sony Xperia XZ Premium ongororo: Performance
Izvo hazvifanire kushamisika kuti sezvo yekutanga foni kuburikidza neRecombu Towers inofambiswa neQualcomm yazvino Snapdragon 835 takafara kuyedza mugwagwa iyo XZ Premium uye haina kuodza moyo. Iwo mabhenji mukati menzvimbo imwechete seyakafanana neGlass S8 uye S8 + uye mukushandiswa kwese kunoratidzika kunge kusununguka zvachose nezvose zvaunokanda pairi, pasina chiratidzo chekukosha kwekupisa kwekuvaka (nyaya yakajairika neyekare Sony mireza). Yakapihwa Sony inoramba iri pamusoro pe software optimization, iyo Premium inofanirwa kuramba iri foni inokurumidza uye yakasviba yehurefu hweyakajairika yako 24-mwedzi chibvumirano pasina nyaya.
64GB yekuchengetera kwemukati inoita kunge yakajairwa mubhadharo weiyo 2017 mureza smartphone uye zvinongopa chete vashandisi chikonzero chekushushikana kana vachironga pakuona 4K zvemukati uye hapana chimwe chinhu. Neraki, kukura kwambotaurwa kunofanira kubatsirawo sezvo uchigona kurovera mune chero chinhu kusvika pa256GB microSD kadhi kana Premium yako ikatanga kunzwa kunge yakamanikana.
Kana iri yehupenyu hurefu, mukushandisa kwakawanda iyo XZ Premium zvipikiri Sony vimbiso ye-ese-mazuva bhatiri hupenyu uye paired kune imwe smart smart manejimendi tech inonzi 'Battery Kuchengeta', inofanirwa zvakare kudzikisira zvakanyanya nenyasha nekufamba kwenguva. Uyezve, STAMINA modhi yakamboita paruoko kana iwe uchida kuti foni ibate kwenguva yakati rebei usati wadzokera kupulagi poindi.
Kunyangwe iyo processor yemuno inotsigira yeQualcomm inotevera chizvarwa Chikurumidza Charge 4.0 standard, iyo XZ Premium inorongedza iyo 3.0 iteration pachinzvimbo, ichikupa iwe pamusoro pe60 muzana kubhadharisa kwe3230mAh sero mushure memaminetsi makumi mashanu nemashanu mupaki, zvinopfuura zvakakwana kuti upfuure nezuva.
Sony Xperia XZ Premium ongororo: Kamera
Nekuenda kuPrimiyamu urikutorawo yekutanga Sony foni nekambani Ziso Rekufamba sensor tekinoroji, iyo inotsiva iyo tri-sensor inoshandiswa neXZ uye inodonhedza iyo megapixel kuverenga kusvika ku19 (zvichireva kuti mifananidzo inogadziriswa nekukurumidza) nepo ichiwedzera saizi yepikisi yega yega yekuvandudza mashandiro emwenje akaderera.
Yakapetwa nehupfumi hwedzimwe imaging wizardry maererano neSony shots inofanira kuoneka 19 muzana inopenya ne50 muzana shoma ruzha uye nepo isu tisina kutora mita yemagetsi kuti tiongorore, vanoita kunge vane ropa rinoshamisa. Yakadzika mwenje kupfura iri kunyanya kusunga kune ese akakodzera zvikonzero asi iyo XZ Premium zvakare ine yakanakisa snappy shutter uye imwe yeanonyanya kugona iterations yeiyo Superior Auto modhi yatakamboona - yakanakira yekukakavara-isina kutora mifananidzo.
Zvakare nemaAR modes, ekugadzira mhedzisiro, yekudzivirira manyore uye 4K vhidhiyo kurekodha, zvese izvo zvatakaona pane apfuura Sony mafoni, iyo XZ Premium zvakare imwe imwe yakasarudzika tarenda ine yayo Super Slow Motion vhidhiyo yekurekodha, chimwe chinhu chatakatsanangura kare se kuva nekuonekwa kuti unotenda.
Kutenda kuneyeboard memory yakarongedzwa mukati mekamera pachayo, iyo XZ Premium inogona kutora 0.18 masekondi e720d HD vhidhiyo pamafuremu 960 pasekondi, zvakapetwa kana zvakapetwa kupfuura inotevera inotevera inononoka kufamba nzira pafoni. Ipo isinganzwike kunge yakawanda, inonoka iwo maficha kusvika pamakumi matatu mafuremu pasekondi uye unenge uchiwanzo kuwana mhedzisiro inoshamisa.
Pane zvakawanda zvekutaura nezvayo neiyo XZ Premium's snapper setup zvekuti isu taigona chete kuzviita ruramisiro mune yakatsaurirwa kamera ongororo.
Verenga zvinotevera: Sony Xperia XZ Premium kamera ongorora
Sony Xperia XZ Premium ongororo: Mutongo
Kune vanhu vazhinji, iwo Xperia XZ Premium yemusoro wenyaya maficha ari akawanda mapato zvidimbu pane zvikonzero zvakakosha zvekuutenga, asi kunyangwe pasina ivo, ichi chakasimba chechokwadi chepamusoro-tier mureza.
Zvakare, inodzora yakatangira nayo ne £ 50 (iyo Z5 Premium yaive £ 699 payakatanga kuvhura) nevakwikwidzi vayo vakuru, vese Samsung Galaxy S8 uye S8 + pamwe ne Google's Pixel XL uye iPhone 7 Plus.
Kana iwe watove fan fan saka hapana nzira chaiyo iyo iyo XZ Premium inogona kuodza moyo uye kana zvisiri, kune avo vari mumusika weiyo nyowani-yekupedzisira blower, Sony yakaona kuti kune zvikonzero zvisingaverengeke nei XZ Premium iri foni kuti iende.
Sony Xperia XA1 Ongororo: Mukudzika
← A script Kuisa Dzimwe yepamusoro GTK Themes mu Ubuntu 16.04 & Yakakwira Ubuntu 17.04 (Zesty Zapus) Inowanikwa Pakutsvaga →